laacib » Seria A: Juventus oo lix dhibcood nadiif ah hogaanka horyaalka Seria Ku qabatay Xilli Douglas Costa oo saddex jeer uu caawinad sameeyay.
Seria A: Juventus oo lix dhibcood nadiif ah hogaanka horyaalka Seria Ku qabatay Xilli Douglas Costa oo saddex jeer uu caawinad sameeyay.
Juventus aya lix dhibcood oo nadiif ah hogaanka Seria A kaga sareysa Napoli, ka dib markii caawa uu saddex goo uu caawiyey Douglas Costa ciyaar kusoo idlaatay Juve 3-0 Sampdoria.
Bianconeri qeybtii hore ee ciyaarta saameyn weyn kum aysan laheyn ciyaarta, balse daqiiqadii ugu dambeeyay Miralem Pjanic oo dhaawac noqday, Douglas Costa ayaa ciyaarta is badal ku sameeyay.
Juve madax xanuun ayey kazoo qaaday ka dib markii Champions League isaga soo hartay todobaadkii lasoo dhaafay, ka dib markii daqiiqada ugud ambeeyay ee ciyaarta Ronaldo gool ku laad loo dhigay shabaqa soo taabsiiyay.
Mario Mandzukic ayaa daahfuray goolasha kaasoo lugta midig ku taabtay fursad soo martay ka hor seeriga qeyta hore lagu kala nasanaayo garsoorka inta uusan ka dhawaajin.
Ka dib markii dib lisugu soo laabtay Benedikt Howedes ayaa shabaqa soo taabtay ka dib markii uu xiddiga reer Brazil ee Costa uu kubad cajiib ah lugta ka saaray, ka hor inta uusan Sami Khedira kasoo toogan goosha cabir dhan 9-yaardi.
Ugu dambaytiina ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 3-0 oo ay ku awood sheegatay Juve waxeyna hogaanka ku haysaa lix dhibcood madama Napoli ay shaqeysatay 78-dhibcood halka Juve ay shaqeysatay 84-dhibcood min 32-kulan ay ciyaareyn horyaalka Seria A.